China Umgxobhozo wamanzi kunye neoyile-egxotha i-Polyester yenaliti-yeenqindi Felt Bag mveliso kunye nabathengisi | Xintian
Inqanaba lokungena elinamanzi le-polyester ezimbini-ezithenwe zaziva ukuba ingxowa yeefilitha ifikelela kwinqanaba. Ikwaqinisekisa ukuba ipholiyesta enamacala amabini okucoca ifreyimu akukho lula ukuyivimba kwindalo enomswakama omkhulu, eyonyusa kakhulu ubomi benkonzo yesingxobo sokucoca kwaye inciphise ubunzima bokusebenza ngesandla. Ngelo xesha, umphezulu ipholiyesta ezimbini-prick inaliti-ubungqina waziva ibhegi lokucoca ulungile kwaye permeability umoya ilungile, eqinisekisa iimpawu umphezulu lokucoca elingaphandle ipholiyesta-prick ezimbini inaliti-ubungqina waziva ibhegi lokucoca ulwelo Kulula ukuba uxobule kwaye kulula ukwenza kwakhona umaleko wokucoca ikhekhe. Qaphela: Ngokubanzi, ukuba iasidi yeegesi ezinothuli incinci kakhulu, iqondo lobushushu lombethe ngama-40-60 ° C kwaye ukuba iasidi inkulu, ubushushu bendawo yombethe bunokuba phezulu njenge-120 ° C.I-Dacron engenawo amanzi kunye nobungqina beoyile. ilaphu yengxowa kwinkqubo yokusebenza kwebhegi, kuba uthuli olusegazini luqukethe ukufuma okungakumbi kunye neoyile kunye ne-hygroscopicity kwaye kulula ukukhupha uthuli, phezu kothuli kunokuvelisa ifilimu yamanzi okanye ifilimu yeoyile kwaye yonyuse ukunamathela, nangona kuyanceda ukuqokelela uthuli, kodwa kuya kwenza kube nzima ukususa uthuthu. Ngokukodwa xa iqondo lobushushu eliphezulu irhasi ikwimo yokufuma okuphezulu, imeko yokuxinana kwenzeka ngenxa yesenzo sokupholisa igesi yangaphandle.Oku akunakwenza kuphela isikali sothuli esiqokelelweyo kumphezulu wepolyester engenamanzi kunye nengubo ye-oyile-ubungqina yengxowa, okanye i-jam, kodwa ikwazonakalisa izixhobo zokwakha, yonyusa ukusebenza kokuqina komqokeleli wothuli, kwaye ichaphazele ngokuthe ngqo ukusebenza okuqhelekileyo komqokeleli wohlobo lwengxowa.
I-Dacron engena manzi kunye ne-oyile yobungqina beengxowa isetyenziswa kakhulu ekususeni uthuli lwam, ukuqhushumba iziko ngenaliti yokutsalwa kwesityalo sentsimbi, isityalo sesamente, inkqubo yothutho lwamalahle yesityalo samandla, njl.
Ilaphu lokucoca lisongwe kwaye lifakwe i-PTFE (iarhente engangeni manzi), nesetyenziswa kumaxesha anomxholo ophezulu wokufuma. Izinto zokucoca ulwelo akukho lula ukubhloka ibhegi yokuncamathisela, ubomi benkonzo yengxowa yelaphu yandiswa, iqondo lokuhamba kwegesi lenyukile, kwaye iindleko zokugcina zigcina kakhulu.
Ubunzima: 500g / m '
Material: Ipholiyesta / ipholiyesta Antistatic zeendawana Ukutyeba: 1.8mm
Ukuvumeleka: 15m³ / m² · min
Ukulawulwa kwamandla ombane:> 1200N / 5 x 20cm Amandla olawulo lobushushu: <35%
Iqondo lokusetyenziswa: ≤ 130 ° C
Egqithileyo Ubungqina bePolyester eneenaliti ezine-Felt Bag (engenamanzi, i-antistatic, ubungqina beoyile)
Okulandelayo: Isakhelo soMqokeleli Wothuli